Ezempilo, Impilo yabantu
Namuhla, amadoda eqhubeka ngokukhalaza ngesifo se-potency ne-libido. E-Italy, odokotela baye bahlola ukuthi ukwephulwa kwe-potency kungabonisa isifo se-coronary senhliziyo esilandelayo eminye iminyaka engu-2-3 ngaphambi kokubonakala kwezibonakaliso zokuqala. Ngokwezifundo eziqhutshwayo, amadoda angama-93% akhathazekile ngezinkinga zokusebenzisa iminyaka engu-1-3 ngaphambi kokuba izinkinga zenhliziyo ziqale. Ngemuva kokuthola le datha, amadoda aphethwe amandla angathunyelwa ukuze abone isidumbu sezinhliziyo.
Kunezimo lapho ukubonakaliswa kwe-IHD kungabonakaliswa, bese iziguli zihlolwa ngokucophelela ukudalula izifo zenhliziyo ezifihlekile. Ngemva kwalokho, udokotela unikeza izincomo ngokushintsha kwendlela yokuphila.
Odokotela bethu baseRussia bayavumelana nodokotela base-Italy. Ngaphezu kwalokho, kusukela ngombono ososayensi baseRussia, ukuphulwa komsebenzi we-erectile kungaholela ekunciphiseni kwamazinga e-testosterone. Ngenxa yalokho, i-libido inciphise emadodeni. Ezimweni ezinjalo, kukhona i-Cialis kuma-pharmacy. Kwaphinde kwafakazelwa ukuthi impilo ejwayelekile yendoda ixhomeke emgangathweni wekhono lobungqingili kanye nesifiso socansi.
Ngasekuqaleni kwekhulu lama-20, abacwaningi basekhaya bafakazela ukuthi ukushisa komfutho wegazi kunesidingo kakhulu emadodeni ahlehliwe amandla, futhi izijovo ezengeziwe ze-testosterone zinomthelela omkhulu.
Kwamadoda angu-57% ahlinzekwa ngokungahambisani ne-aortocoronary, i-erectile dysfunction yabonakala ngaphambilini. Futhi phakathi kwala madoda ayesezibhedlela nge-infarction ye-myocardial - ngo-64%. Ngenxa yalokho, kutholakala ukuxhumana okuqondile kwamathambo we-vascular nge-erectile disysction. Indoda kufanele ibone i-ED njengendlela ebonisa ukuthi kufaneleka ukubona udokotela futhi ihlolwe ngokuphelele. Kukhona, yiqiniso, ukulungiswa kwe-Cialis intengo yalo ithayela umuntu ojwayelekile. Futhi lesi sidakamizwa ngeke sinikeze umphumela unomphela futhi ngeke sixazulule zonke izinkinga zempilo. Konke okufanayo kuyodingeka ukuhlola inhliziyo.
Mayelana nesimo se-testosterone kufanelekile ukuthi ukunciphisa kwayo kubonakala kungekhona nje kuphela, kodwa nakwezinye izitho nezinhlelo, ngakho-ke, isifundo salo sizoba ngaphezu kwanoma yikuphi ubudala.
Ososayensi emazweni amaningi basifinyelela esiphethweni sokuthi ukungasebenzi komuntu e-erectile kumuntu omdala akuhlosile kuneminyaka yobudala, kodwa ngendlela yokuphila, ukuba khona kwemikhuba emibi, izifo ezingapheliyo. Ngezikhathi ezithile ukunganakiwe, izifo ezingelashwa zingabangela ukungasebenzi kahle kwe-erectile futhi kwehla ku-testosterone. Uthotho olusha lwe-pathologies engokwenyama luqala.
Ngeshwa, ngisho nodokotela ngokwabo abaqapheli njalo izifo zesiguli. Kodwa namuhla umuthi uyakwazi ukuhlinzeka usizo oluphuthumayo ngisho nangezimpawu ezincane kunazo zonke zesifo, ukuvimbela ukuphazamiseka kwezicathulo, ukubuyisela amandla wesilisa, kanye nakho konke ukuphila. Cabanga ngempilo yakho, uma ungakwazi ukuqonda isizathu sokwakhiwa okwanele, mhlawumbe lena "insimbi" yokuqala yokuxhumana nochwepheshe.
I-PSA mahhala: evamile kumadoda
I-stimulant engcono kakhulu ye-prostate: ukubuyekezwa. Indlela yokusebenzisa i-prostate stimulator? Umgqugquzeli we-prostate ngezandla zabo
I-sperm ayisebenzi: izimbangela kanye nokwelapha
Medicine "Enterozhermin": yokusetshenziswa, ngempela
Clerodendrum Thompson - uphawu uthando nenjabulo
"Konvalis" imithi. Yokusetshenziswa kanye nencazelo